शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल – Health Post Nepal
यसरी भयो डा. पुन प्रकरणको ‘सेफल्यान्डिङ’
सरकारले मिडियामा बोलेको आराेपमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा उपस्थित पत्र काटेपछि सिर्जित आलोचनाको लहरमा नयाँ ‘टुइस्ट’ आएको छ। आइतबार मध्यान्हदेखि मन्त्रालयमा विभिन्न भेटघाटमा व्यस्त राखिएका डा. पुन अपरान्ह मन्त्रालय परिसरबाटै एउटा विज्ञप्ति जारी गरी बाहिरिए। मन्त्रालयको...
धरान पुगेर पारसमणि भुजेलले भने, ‘टेकु अस्पतालमा तनाव भएपछि भागें’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट भागेका पारसमणि भुजेल धरान पुगेका छन्। धरान(१० विशालपथका ३९ वर्षीय भुजेल बुधबार राति अस्पतालबाट भागेका थिए। घर पुगेका उनलाई श्रीमतीले लिएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेकी थिइन्। भुजेल अहिले बिपी प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा रहेको...
बुधबार राति साढे ८ बजे एक युवा आफूलाई ज्वरो आएको भन्दै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा पुगेका थिए। आफू कोरियाबाट फर्केको बताउने ती युवाले ज्वरो आएको भनेपछि डाक्टरले ‘निगरानी’मा राख्न खोजे। विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण हुनसक्ने आशंकामा डाक्टरले...